Montenegro vs Romania - World Cup fepetra | Soccer mialoha
+7/ 9584-983-763ahonfo@socceramin 'etshoot.CoM
Match daty: 4 Sep 2017 | Posted: 4 Sep 02:02 2017 GMT + 2 | Soso-kevitra jerena 594 fotoana.
Montenegro vs Romania – World Cup fepetra
Montenegro vs Romania – World Cup fepetra, Montenegro dia 2 ao amin'ny Vondrona E 13 hevitra. Manana mitovy hevitra toy ny habetsahan'ny Danemark nefa tanatin 'aoriana Polonina telo isa. Rehefa mandresy lahatra fandresena nirakitra an-tsoratra any Kazakhstan telo andro lasa izay, dia ho feno fahatokiana avy ho amin'ity lalao. Ny fanantenana ny tonga toerana faharoa dia tena velona be, ary izy ireo ao amin'ny toerana tsara tarehy amin'ny fotoana amin-javatra tena na dia vondrona. They`ve efa matanjaka ao an-trano tsara tarehy io tsingerina, hokapohin'ny i Kazakhstan sy ny Armenia, raha mbola very hevitra ihany Polonina. Noho izany lalao Tumbakovic dia hanana ny feno andiana amin'ny ampiasaina.
Romania ny faha-4 amin'ny 9 hevitra, dia ao amin'ny Fandresena roa ihany samy ho an'i Armenia. Ny farany, izay tonga telo andro lasa izay, dia mandresy lahatra tsara tarehy iray, satria nahavita handrava Armeniana 91st ihany minitra. Izy ireo dia malahelo ny sazy in Faha 55 minitra, nefa mbola naniry fampisehoana na aiza na aiza akaiky ny mahantra sy ny fomba hahatonga-efatra lalao winless miezaka ho tapitra. Miherikerika izy mandresy lahatra amin'ny rehetra ny lalao ankoatra ny 5:0 hokapohin'ny an'i Armenia ary saika izy ireo tsy tena vintana ny mahatratra laharana faharoa. Toa an'i Montenegro, Romania dia tokony koa ho amin'ny tanteraka andiana eto.
Montenegro nampiseho tsara tarehy mandritra ireo fampisehoana tsara toetra, amin'ny faharesena an'i Armenia ihany no mitsangana avy tahaka ny ohatra ratsy. Romania amin'ny lafiny iray hafa, dissapointed ny fomba sy ny vokatra handinika fa. Azo Montenegro vintana ny fiarovana ny toerana faharoa ao amin'ny vondrona, indrindra fa mahalala dia hampiantrano Danemarka tamin'ny Oktobra, rehefa nively azy ireo ny fihaonana farany. Ary noho izany, izy ireo dia mitady hevitra telo eto, ary fa tsy afaka mahazo tsara azy ireo taorian'ny seho any Kazakhstan. Nandinika Montenegro dia nilalao tao an-trano, ary ny ankapobeny fahatsapana tsara kokoa, I mihevitra azy ireo ho favoris eto. Ary raha mbola afaka kosohy ny avy Romania ny stalemate, I can`t hahita azy ireo naka teboka telo. Ary noho izany, Tompon'ny maro, hanampy amin'ny 0 Azia kilema toa toy ny fomba tsara ny handeha.